'प्रधानमन्त्रीलाई लामो गाडीको पछाडि सिटमा राखेर चलाए मात्र यो बाटो बन्छ नत्र बन्दैन' - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘प्रधानमन्त्रीलाई लामो गाडीको पछाडि सिटमा राखेर चलाए मात्र यो बाटो बन्छ नत्र बन्दैन’
Posted by Milap Subedi | २ श्रावण २०७४, सोमबार ०८:१९ |
२ साउन,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र यातायातमन्त्रीलाई लामो गाडीको पछाडि सिटमा राखेर चलाए मात्र यो बाटो बन्छ नत्र बन्दैन’, नारायणगढ–काठमाडौं चल्ने बसका सहचालक रामहरि भट्टराईले भने ।
दिनहुँ खाल्डाखुल्डी र धुलाम्मे सडकको यात्रा गर्नुपर्दा उनले यसरी आक्रोश पोखेका हुन्। नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको दयनीय अवस्थाबाट आजित उनले सास्ती सुनाउँदै सरकारको आलोचनासमेत गरे ।
बाटो राम्रो छैन, दुईटा गाडी छिर्दैन, भैंसी पुरिने खाल्डो छु, उनले भने ‘ज्यानको माया मारेर हिँड्नुपरेको छ ।’ खाल्डाखुल्डीका कारण सवारी जाम बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसबाहेक कति बेला पहिरो जाने हो भन्ने टुंगो हुँदैन । पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा जाम हुँदा बढी डर लाग्नेको गरेको उनले सुनाए ।
त्यसपछिको सम्झौताअनुसार २०१७ को डिसेम्बर २१ मा काम सक्नुपर्ने हो । सडक विभागले यही असार २३ गते मात्र म्याद थपको निर्णय गरेअनुसार फेब्रुअरी २० लाई अन्तिम मानिएको छ । अहिलेसम्म काम ५१।४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । वर्षात्को समयमा काम नहुने निर्माण कम्पनीले जनाएका छन् ।
विस्तारको काम सुरु भएसँगै सडकको अवस्था बिग्रिँदा यात्रा कठिन भएको छ । ठाउँ–ठाउँमा पहिरो खस्ने गरेको छ । खाल्डो नपुर्दा जोखिम बढेको छ ।
दासढुंगा, सेती दोभान, घुमाउने, सिमलताल, जलवीरेलगायत क्षेत्र पहिरोको जोखिममा छन् । उक्त सडकखण्डका २९ स्थानलाई पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएको छ । ४४ घरधुरी पनि पहिरोकै जोखिममा छन् । सडक विस्तारको काम सुरु गरेपछि नै पहिरो खस्न थालेको स्थानीय बताउँछन् । आयोजनाको काम थालेपछि २०७२ साल माघ २४ गते पहिलोपटक पहिरो खसेको थियो ।
इच्छाकामना-६ कालिखोलाका गौबहादुर गुरुङले ‘हिजोआज पहिरो खसेको दृश्य सामान्यजस्तैु लाग्न थालेको बताए । बाटो बनाउनेले नै बिगारेका हुन्, ‘भत्किने भए पहिल्यै भत्किन्थ्योु उनले भने ।
Previousकति अर्ब गयो त स्थानीय तहमा ?
Nextप्रचण्डका मन्त्रीले क्वार्टर छाड्दै छाडेनन्
देउवाप्रति कोइराला आक्रामक, तत्काल राजीनामा दिन माग !
१८ माघ २०७४, बिहीबार १६:३२
‘श्रीमती सांसद छदैछिन्, पतिले जे गरे पनी भयो’
१३ श्रावण २०७५, आईतवार ०९:२७
बाढीपहिरो पीडित परिवारलाई राहत वितरण गर्न आरआर क्याम्पसका विद्यार्थी रौतहटमा
२ भाद्र २०७४, शुक्रबार २०:५८
बाबुराम भट्टराईको सुरक्षार्थमा खटिएको प्रहरीलाई पनि छाडेन ट्राफिक प्रहरीले !
५ भाद्र २०७३, आईतवार ०७:०८